58 Sano Kadib Maxa Ka Haray Mirihii Midnimada? - Halbeeg News
58 Sano Kadib Maxa Ka Haray Mirihii Midnimada?
Maanta oo kale , 58 sano ka hor, oo ku beegan maalin Jimca ah 1 jully 1960, ayay ahayd markii shacabka Soomaaliyeed u rumoowday qeyb ka mid ah riyadoodii iyo hamigoodii ahaa in shantii gobol ee gumaesiga u kala jartay dhulka Soomaali dib loo xoreeyo loona mideeyo. maalintaas waxaa gobanimada hantay gobolada Koonfureed, isla maalintaas waxaa midowbay labadii gobol ee Waqooyiga ee uu gumaysanayay Ingriiska iyo Koonfurta oo uu gumeysanayay Talyaaniga, waxaana la yagleelay Dowladdii Soomaaliya ee ka turjumaysay mirihii gobanimada iyo midnimada.
Marka la fiiriyo dareenka dadka Soomaaliyeed ay muujinayaa munaasabadan aad ayuu u kala duwan yahay, sababtoo ah farxadii la rabay in ay ka mideysnaadaan Soomaalida iyo Dhadhankii macaanka ee la rabay inay yeelato maanta waxa ka xoog batay kharaarka ay dareemayaan dad badan oo Soomaali ah, oo dareensan inaan u dabaal-dagayno guul miraheedii ba’ay. Marka laga reebo tiro yar oo madax ah, oo dowladnimda ku qabo manfac gaar ah, ku fadhiyo magaceeda kursi, ku helo masruufka caruurtooda, marka sidoo kale laga reebo Soomaalida qurbaha ku nool ee munaasabadan oo kale u yihiin wehel iyo maaweelo, marka laga reebo labadaas qolo inta badan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha ee aan ku qabin dowladdnimada maslaxad la taaban karo, balse laga yaabo in ay taa badalkeeda culays ku tahay dowladda, wax macna ah oo weyn uma sameyneyso munaasabadan xuska gobanimada, midnimada iyo qarannimada. Dhanka kale waxaa jiro qeyb ballaaran oo kamid ah shacabka gobolada Waqooyi oo u arko inay maanta tahay maalin lugooyo.
Anigoo arintan ka duulayo waxaan doonayaa inaan uga qeyb-qaato xuska munaasabadan qormadan kooban, jawaabnna ugu raadiyo 4tan su’aalood ee u baahan in la isla meel dhigo si aan uga baxno jawareerka umadeed ee nala baday. In la isla meel dhigo jawaabaha su’alahan waxa ay fure u yihiin dib u dhiska Soomaaliyada cusub iyo inaan mar kale dib loo qaadin dariiqii lagu lugo’ay. Afartaa su’aal waxa ay kala yihiin: Siday ku timid gobanimada iyo midnimadda? Maxaa keenay saluugga dowladdnimada? Maxaa burburiyay qarannimadii? Sidee dib loogu soo celin karaa qarannimadii iyo midnimadii?
Siday ku timid Gobanimada, Midnimadda iyo Qarannimada?
Isfahan-darrada taagan ee la isku mari la’yahay wali waxaa kamid ah in aan la isla meel dhigin ciidda iska leh libinta qarannimada. Ma shakhsiyaad, reer iyo gobol gaar ah ayaa iska lahaa guushii gobanimada, midnimada iyo qarannimada? Mise waa loo dhannaa halganka.
Halgankii mirihiisii la gurtay 1960 ee lagu hantay qarannimada , sida ay ku timid dowladdan maanta aan doonayno inaan dib u yagleelno waxa ay ku timid sidan soo socota:
1- midnimadii dhashay qarannimada waxa ay aheyd mid ku timid rabitaanka Soomaalida iyo raali ahaashaheeda, kumana imaanin khasab, juujuub ama garba duub ka yimid dhanka xoog shisheeye ama mid gudaha ah sida ay ku dhisan yihiin in badan oo kamid ah dowladaha Afrika ee kala jaanka ah ee gumaystaha isku sidkay.
2- Qarannimadu waxa ay ku timid sidoo kale halgan loo dhanyahay oo ka soo bilowday kacdoonkii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan Illaa uraradii rayidka ahaa ee gobanima doonka ee samaysmay dagaalkii 2aad ee dunida kadib ee SYL ugu caansaaneyd. Waxa uu ahaa halgan leh labo ujeedo oo waaweyn oo cad cad oo ka dhaadhacday qof kasto oo Soomaali ah oo ku nool 5tii gobol, isla qaateen ninka siyaasiga ah ee hogaanka ah illaa iyo ninka geela la joogo miyiga, labadaas ujeedo oo kala ah: in shanta Soomaaliyeed la xoreeyo, kadibna wada dhistaan dowlad mideysan. Marka libinta ama abaalka unkidda jamhuuriyadda malaha Soomaalida labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi oo kaliya, ee waxaa ka wada qeyb qaatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Geeska Afrika.
Maxaa Keenay Saluugga Mirihii Gobanimada ee Dowladdnimada?
Dowladdii curatay iyadoon labo jirsanin ayaa waxa bilowday in ay dadweynaha Somaaliyeed saluugaan mirihi gobanimada ee ka turjumaysay qarannimada, saluugaasi oo ay kuna cabiraan dareenkooda qaabab kala duwan oo ay fanka iyo suugaanta kamid ahaayeen, waxaa la oran karaa dhowr sababood ayaa ugu waynaa in dowladnimada lagu muhdo:
1- filashada ay shacabka ka filayeen dowladdooda (maandeeq) inay barwaaqo kala kulmi doonaan oo ahayd mid aad u sarraysay, mana aysan ogayn in, si loo gaaro horumar la dareemi karo, loo baahanyahay tacab, shaqo adag iyo waqti dheer. Waxa ay is lahaayeen hadii ay dhaxlaan Ingiriis iyo Talyaani oo ay ku fariistaan dad Soomaali ah kursiga talada inay ku noolaan doonaan heer nololeed lamid ah kii dadkii gumaysiga ahaa ku noolaayeen.
2- arinta kale ee dhalisay saluugga miraha dowladnimada waxa ay aheyd maamul xumadii, ku tagri falkii awoodda, boobkii hantida guud iyo inay manfacadii dowladda kusoo uruurto gacanta intii madaxda noqotay oo kaliya.
3- waxaa kaloo jiray sababo sake oo iyaguna qeyb ka ahaa in ay dadku ku hungoobaan dowladnimada oo ay kamid ahaayeen kala duwanaashaha labada gumeysi ee Ingiriiska iyo Talyaaniga ee ay kusoo kala barbaareen labada gobol, raadka labada dhaqan ee kala duwan ee dhanka siyaasadda, maamulka, dhaqalaha iyo sharciyada ee ay reebeen labada maamul ee gumeysiga, baaxadda dalka soomaaliya oo wayn, isgaarsiinta iyo gaadiidka oo aad u liitay, saboolnimda iyo dowladda oo ku tiirsaneyd kaalmada shisheeye. Dhammaan arimahaasi waxa ay ahaayeen turraanturrooyinka hor yaalay dowladnimada cusub.
In kastoo dadku saluugeen dowladnimadii, hadana xaaladda faraha kama bixin sidii markii dambe dhacday , arintuna ma dhaafin cabasho iyo dhaleeceyn, sababtuna waxaa ay ahayd in xukunku ahaa rayid isticmaalaya qaab nabadeed, oo ku dhisan wada-hadal , xuriyada ay dadku u lahaayeen inay hadli karaan, canbaareyn karaa dulmiga iyo musuqmaasuqa madaxda, iyo sidoo kale rajada ay qabeen dadku in mar walba doorashooyinku keeni karaan isbadal, suurto galna tahay in hogaan wanaagsan ku soo baxo tartanka. arimahaas oo dhan waxa ay ka fududaynayeen muwaadinka soomaaliyeed culeyska uu dareemayo ee ka dhashay niyad -jabka uu kala kulmay dowladdiisii.
Maxaa Burburiyay Qarannimadii?
Qarannimada iyo midnimadii waxa uu burburkeedu bilowday markii ay talada dalka qabteen milatarigii uu hogaaminayay G. Maxaamed Siyaad sandkii 1969, inkastoo muddadii hore dadku taageereen kacaanka, una maleeyeen in maamulkoodii ka heli doonaan waxii ay ka waayeen dowladdii rayidka, hadana waxa soo baxday in xorriyadii kaligeed ka hadhay dhaxalkii qarannimada ee ay ku cabirayeen ra’yigooda iyo dareenkooda xilligii rayidka ahaa lafteedii la waayay.
Khaladka ugu weyn ee ay shacabka Soomaaliyeed ka galeen qarannimada waxa uu ahaa in reer Koonfureed iyo reer Waqooyiba u sacab tumeen una ogolaadeen in milatarugu cagta mariyo heshiiskii lagu dhisay dalka iyo midnimada ee ay galeen madaxdii labada gobol ee dastuurka ka turjumayay, qodabada heshiiskana ugu muhiimsanayd in dowladdu tahay dimoqraadi, taladuna tahay wadaag, madaxduna ku imaadaan doorasho. Taa badalkeediina aayihii ummadda, taariikhdeedii, diinteedii, dhaqankeedii iyo mustaqbalkeedii loo igmaday in hal qof go’aamiyo, kaligiisna dastuur u qoro ummadda. Hadii reer waqooyigu goosanayaa, maalintaas ayay gar aheyd inay ku dhawaaqaan gooni isu-taag maadaama la jabiyay heshiiskii midnimada .
Dhanka kale, khaladka labaad waxaa galay madaxdii dalka iyo xisbigii waynaa ee SYL oo ahaa xisbiga u hogaamiyay shacbiga gobanimada, midnimada iyo qarannimada, xisbigii aqlabiyada ee xukumayay dalka 10kii sano ee xigtay gobanimada, ee madaxdiisii kala tagtay afgambigii ka dib, badankoodna gacan yare u noqday milatarigii , ee aan muujinin wax diidma ah, khaladkaasi waa midka fursadda siiyay in mar kale saraakiishii ciidanka noqdaan mucaaradka, meeshana ka saaray suurtagnimadii in la helo mucaarad rayid ah oo dhaxla milatariga, dalkana ka badbaadiyo dagaalkii sokeeye ee weli aan dhamaanin.
Sidee dib loogu soo celin karaa midnimadii iyo Qarannimadii?
Jawaabta su’aashani waa mid weyn oo adag, una baahan in la is dul-taago in badan, in laga sameeyo cilmi baaris fara badan oo qoto dheer. Si kastaba haa ahaatee waxaa la hubaa in tiirarkii lagu qotomiyay qarannimadeedii burburtay lafahoodii aan mar kale lagu dhisi Karin qaran cusub.
Waa inaan ogaannaa in midnimadii labada gobol iyo qarannimadii la gaaray1960kii aan lagu keenin xoog iyo ciidan, markii xoog iyo ciidan la isticmalayna waa tii ay burburtay, iyadoo haatan sidaa u kala daadsanna suurto gal ma aha in xoog iyo ciidan kaligiis isku duwo ama dib u mideeyo mar kle. Si qarankii dumay dib loogu soo yagleelo waxa inoo furan oo kaliya dariiqa wadahadalka iyo isqancinta ku salaysan caqli. Waxaan u baahannahay in aan dhowrno sharciga, dastuurka iyo waxa noo qoran ee aannu ku balannay.
Howsha soo celinta qarannimada iyo midnimada waxa ay u baahantahay inaan isu garaawno, dhinac walbana dareemi karo xanuunka dhaawaca ku yaallo qolada kale. waa inaan isu ictiraafnaa xuquuqda aan wada leenahay. Waa inaan ka fogaannaa ficilka iyo oraahda ku salaysan xagjirnimada diineed,midda siyaasadeed iyo midda qabiil.
Ku dhawaad 60 sano ka hor ayaan helnay qarannimo ee su’aashu waxaa weeye ma hanan karnaa oo ma hirgalin karnaa?
Bare ka tirsan Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Ururka Al-Shabaab oo Nabadoon ku Dilay Deegaanka Gamboole ee Shabeelada Dhexe
AMISOM oo Raaligelin ka Bixisay Xanibaadii Guddoomiyaha Aqalka Sare